တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် ယခုနှစ် ပထမ ၄ လပတ်တွင် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ကန်းစုပြည်နယ် ယွိမန်မြို့ရှိ ချန်းမာလေအားလျှပ်စစ်ရုံ၏ လေအားလျှပ်စစ်တာဘိုင်များကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် စက်တပ်ဆင်မှုစွမ်းရည်သည် ယခုနှစ် ပထမ ၄ လပတ်တွင် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာခဲ့ရာ ၎င်း၏ ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု လျှော့ချခြင်းအမြင့်ဆုံး ဖြစ်နိုင်ရေးနှင့် ကာဗွန်အလယ်အလတ်အဆင့်ရောက်ရှိရေး ရည်မှန်းချက်အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလအတွင်း လေစွမ်းအင် စက်တပ်ဆင်မှု စွမ်းရည်သည် ပြီးခဲ့သည်နှစ် ကာလတူထက် ၁၇.၇ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ကီလိုဝပ် သန်း ၃၄၀ ဝန်းကျင်သို့ ခုန်တက်သွားပြီး နေစွမ်းအင် စက်တပ်ဆင်မှုစွမ်းရည် မှာ ကီလိုဝပ် သန်း ၃၂၀ ၊ ၂၃.၆ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသား စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှ သိရသည်။
ဧပြီလကုန်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး၏တပ်ဆင်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်မှုပမာဏသည် စုစုပေါင်း ကီလိုဝပ် ၂.၄၁ ဘီလီယံဝန်းကျင်သို့ရောက်ရှိခဲ့ရာ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ထက် ၇.၉ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာကြောင်း အချက်အလက်များတွင် ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လုပ်မှု လျှော့ချခြင်း အမြင့်ဆုံး ဖြစ်နိုင်ရေးနှင့် ၂၀၆၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကာဗွန်အလယ်အလတ်အဆင့်ရောက်ရှိရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံက ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို စွမ်းအင်ဖွဲ့စည်းမှုတွင် တိုးမြှင့်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ထုန်ပြန်သည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွင် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်၌ ရုပ်ကြွင်းလောင်စာမဟုတ်သော စွမ်းအင်ကို စွမ်းအင်ဖွဲ့စည်းမှု၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ထိ တိုးမြှင့်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: XinhuaEditor: huaxia2022-05-19 00:20:13
BEIJING, May 18 (Xinhua) — China’s installed capacity of renewable energy registered fast growth in the first four months of the year as the country strived to reach its carbon peaking and carbon neutrality goals.
By the end of April, the country’s total installed power generation capacity reached about 2.41 billion kilowatts, rising 7.9 percent fromayear ago, the data showed.
The country is forging ahead in renewable energy development to improve its energy structure. According to an action plan released last year, it aims to increase the share of non-fossil energy consumption to around 25 percent by 2030. ■
1. Photo taken on Dec. 8, 2021 shows wind turbines at Changma wind farm in Yumen City, northwest China’s Gansu Province. (Xinhua/Fan Peishen)